Warbixin Iftiiminaysa Muhiimadda Dhulka Uu Netanyahu Wacadka Ku Karay Inuu Falastiiniyiinta Ka Qaadi Doono - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaWarbixin Iftiiminaysa Muhiimadda Dhulka Uu Netanyahu Wacadka Ku Karay Inuu Falastiiniyiinta Ka Qaadi Doono
Duddus (JigjigaOnline) – Ra’isal wasaaraha Israel, Benjamin Netenyahu, ayaa shaaca ka qaaday in uu maaganyahay in uu dooxada Urdun iyo woqooyiga Baxrul Mayit (ee Daanta Galbeed) u soo goyn doono Israel hadii uu ku guulaysto doorashada guud ee dalkaa ka dhici doonta todobaadka dambe.
Dadka siyaasadda lafa gura ayaa u arka in arintaas uu Netanyahu uga dan leeyahay inuu ku soo jiito codbixiyeyaasha gaar ahaan kuwa midigta. Iyo ta kale oo ah in Israel u aragto qabsashada aaggaas tallaabo lagama maarmaan ah oo ay kaga hortagi karto in mustaqbalka dawlad Falastiin leedahay dhalato.
Israel waxay Daanta Galbeed, bariga Quddus iyo buuralayda Goolan ee Suuriya ku qabsatay dagaalkii Juun 1967. Waxaanay si rasmi ah dhanka bari ee Quddus dhulkeeda ugu dartay 1980, buuralayda Goolan na 1980, in kasta oo beesha caalamku aad uga soo horjeedsatay.
Dooxada Urdun iyo woqooyiga Baxrul Mayit qiyaasta bedkoodu waa 1.6 milyan oo Acre, oo ku teedsan soohdinta dalka Urdun waxaana lagu qiyaasaa in ay tahay ku dhawaad 30 % dhulka Daanta Galbeed oo dadka deganna ay u badan yihiin Falastiiniyiintu.
Dooxada Urdun waxay ka bilaabantaa harada Dabariya ee dhanka woqooyi ilaa Baxrul Mayit, waxaanay gacanta ku haysaa Israel inta u dhaxaysa Baxrul Mayit ilaa dhamaadka Daanta Galbeed.
Tirada dadka ku nool aagaas oo ahaan jirtay lixdan kun oo qof ayaa intii u dhaxaysay 1967 ilaa 1971 ku soo ururtay shan kun oo qof oo keli ah.
Sida ay sheegtay xarunta xuquuqal insaanka Israel ” qayb weyn oo ka mid ah dhulkaasi waxa ka wada xaajoonaya labada dhinac ee Israa’iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta, waxaanu dhulkaasi ku haboon yahay beeraha iyo tamarta (dabayssha) iyo mashaariic kale, laakiin ciidanka Israel ayaa fadhiisin uga dhigtay hawlihiisa milatari”
Sidoo kale dhanka ay ku taallo Baxrul Mayit waxa uu soo jiitaa dalxiiseyaasha, waxaanu sidoo kale ku haboon yahay soo saarista cusbada iyo macdano kale.
Muhiimadda milatari ma leedahay meeshu?
Sida ay sheegtay xarunta daraasaadka nabadda iyo nabadgelyada Israel oo si gaar ah u baadha arimaha milatarigu in “maadaama oo uu isbedelay dabcigii dagaalka iyo aaladaha loo adagsadaaba, in aagaasi aanu ahmiyad milatari lahayn gaara ahaan marka la eego in dooxadu tahay mid cidhiidhi ah oo ballaceeda dhanka woqooyi aanu ka badanayn 40 km, taas macnaheeduna yahay in dhulka Israel badankiisa weerarro gantaalo ah lagu qaadi karo.”
Waxaanay xaruntu intaa ku dartay in muhiimadda keli ah ee aaggaasi leeyahay aanay dhaafsiisnayn maamulka soohdinta iyo adkaynta nabadgelyada.
Hase yeeshee baarlamanka Falastiiniyiinta ayaa dunida ugu baaqay in ay ictiraafka kala noqoto Israel, waxaanu ku tilmaamay hadalkaa Netanyahu “gardarro badheedh ah oo uu kula kacay beesha caalamka iyo goleyaasha caalamiga ah iyo qaraarradii ay ka soo saareen arinta Falastiin”. Sidaa awgeedna ay arintaasi tahay mid keenaysa in dunidu ictiraafka kala noqoto Israel kana baxdo heshiisyada lala galay.
Sidoo kale waxa baarlamanku ugu baaqay golaha loo dhanyahay ee Qaramada Midoobay in uu ka fiirsado xubinnimada Israel ee golaha “maadaama oo aanay u hogaansamayn go’aannadiisa” la xidhiidha dhulka Falastiiniyiinta iyo xaqooda ku noqoshada dulkii ay ka qaxeen.